ချစ်သက်တမ်းကြာသည့်တိုင် ရင်ခုန်သံတွေ ဆူညံနေစေဖို့
ရင်ခုန်သံတွေကို ဘယ်တော့မှ မအေးသွားစေနဲ့။
"မြင်ပါများတော့ ငယ်၊ နမ်းပါများတော့ ပြယ်" တဲ့။ ဆိုစကားလေး ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြာလာတော့လည်း ရိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ အချစ်ရေးမှာဆိုလည်း အချိန်ကြာလာရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က နားလည်မှုတွေရလာတယ်၊ သံယောဇဉ်တွေ မြဲလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကလို ရင်မခုန်တော့ဘူးဆိုရင် ပျင်းရိစရာကောင်းလာနိုင်တယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို အမြဲတမ်း ဆူညံနေစေလိုက်ပါ။
ဒါတွေက ချစ်သူဖြစ်ခါစတုန်းကပဲလုပ်တာ။ အခု လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ရင် မှားသွားမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ် ပရောပရည်လုပ်တာ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားဘူး။ လူချင်းမတွေ့ရလည်း ဖုန်းထဲကနေ မက်ဆေ့လေးတွေပို့၊ ပုံလေးတွေပို့လေ။
တချို့တွေကတော့ ချစ်သူကို ပွေ့ဖက်တယ်၊ နမ်းတယ်။ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ ချစ်ကြောင်းပြသတယ်။ ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုအရာတွေက အချစ်ရဲ့အရသာကို ခံစားမိစေတာလဲ? အပြင်ထွက်ပြီးညစာစားတာလား၊ လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ထားတာလား? အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။ အဲ့တာလေးတွေလည်း ပြန်ထုတ်သုံးပါ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သမျှ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားဘူး။ ပျော်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ ဟာသလေးတွေ ပြောပေးတာကအစ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ပေးတာလိုမျိုးအထိ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အတူတူပျော်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ။
သင်အကြိုက်တွေ့နိုင်မယ့်ဆောင်းပါး ---> အချစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲ (၇) ခု
အရင်တုန်းက အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ပြောကြတာလည်း တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရောကိုယ်ပါ အပြန်အလှန်စကားတွေပြောကြရင်း အမှတ်တရတွေဆိုတာ အတွေးထဲပြန်ပေါ်လာရင် အရင်ကလိုပဲ ရင်တွေခုန်လာဦးမှာ။
နှစ်ယောက်အတူ အပြင်သွားမယ်၊ ညစာအတူစားမယ်၊ လျှောက်လည်မယ်။ ဟိုးအရင် ချစ်သူဖြစ်ခါစတုန်းကအတိုင်းပဲ နောင်လည်း အမြဲတမ်း ဒိတ်လုပ်နေပါ။ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားတဲ့ခံစားချက်တွေက အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။